Al-Shabaab oo qorsheeyay in ay weeraraan musaanad uu leyahay Qaranka Kenya | Somsoon
Home WARAR Al-Shabaab oo qorsheeyay in ay weeraraan musaanad uu leyahay Qaranka Kenya
Al-Shabaab oo qorsheeyay in ay weeraraan musaanad uu leyahay Qaranka Kenya
Booliiska Kenya ayaa sheegay in ay Al-shabaab qorsheeyeen in ay weeraraan munaasabad muhiim ah oo lagu qabto Kenya balse howlgal ay ciidanku sameeyeen 1-dii bishaan ay ku dileen xubno ka tirsan raggii loogu talo galay in ay weerarka Fuliyaan.
Sedax ka mid ah ragii weerari lahaa dabaaldegga Mushaa oo ah maalinta la xuso halyeeyada Kenya ayaa ladilay, sida uu Wariyay daily Nation.
Warbixino sirdoon ay heleen baareyaal Kenyan ah ayaa sheegaya in Al-shabaab ay Mombasa geeyeen Bakari Chibonja , Athuman Nyae iyo hubkoodii si ay u weeraan munaasabadaha muhiimka ah ee Dowladda kuwaas soo dhamaaday Axaddii todobaadkaan.
“Waxa la rumeysanyahay in xubno ka tirsan Al-shabaab oo leh shabakad aad isugu xiran ay dagaalamaashooda usoo direen Mombasa si ay u weeraraan xarumo Dowladeed” ayuu yiri Baare ka tirsan Waaxda Argagixiso la Dirirka Booliiska Kenya Dickson Indaru.
Waxaa la helay waxyaabaha qarxa oo ay Al-shabaab u diyaariyeen in ay ku weeraraan munaasadda Muushaa ee magaaladda Mombasa kadib baaritaan laga sameeyay deegaan lagu magacaabo Dudus, sida ay uu sheegay baaraha ka tirsan booliiska Kenya.
Hubka la helay waxaa uu ahaa mid awood u leh in uu si daran wax u bur-buriyo , dhismihii uu hubku yaalayna waxaa sidoo kale laga soo xiray laba qof oo lagu eedeeyay in ay hubka ilaalinayeen.
Chibonja iyo Nyae ayaa maxkamad ka hor sheegay in aysan lug ku lahayn eedaha argagixisonimo ee loo soo jeediyay islamarkaana aysan xaubin ka ahayn Al-shabaab.
Munaasadda la sheegay in ay Al-shabaab u qorsheeyeen in ay weeraraan waxaa loo dabaaldegaan 20 October sanad walba waxayna dadka Kenya xasuustaan halyeeyadda Qarankooda.
Article horeSoomaaliya oo hey’adaha gargaarka ugu baaqday in ay deg-deg u caawiyaan dadka baahan
Article socoda Maraykanka oo ka shaqaynaya in wadahadal lagu dhameeyo dacwadda badda